Photos निःशुल्क प्लगइनहरू हाम्रो फोटोशप पूरा गर्न क्रिएटिव अनलाइन
जोस एन्जेल | | छविहरू, पुनरावृत्त
उत्तम प्रतिस्पर्धाको बावजूद कि एडोब पोर्न्ट प्राप्त गर्दै छ, अधिक प्रयोग भएको उपकरण अझै फोटोशप नै हो। अधिक विज्ञ र नयाँ प्रयोगकर्ताहरू सबैले नाम दिएका प्रोग्राममा फर्काउँछन्। बाह्य प्लगइनहरूमा प्रोग्राम डाउनलोड गरेर सुरू गरेर त्यहाँ भिडियो र ट्यूटोरियलको मात्रा पनि यो कारणले हो। त्यो कुनै पनि डिजाइन अनुशासन को लागी अधिक प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम को लागी बनाउँछ।
र जे होस् फोटोशप ठूलो क्षमताको साथ एक उपकरण हो डिजाईनका लागि, त्यहाँ प्लगइनहरू छन् जुन यसलाई पूर्ण गर्दछन्। र के यो केहि उपकरणहरूले तपाईंलाई स्रोतहरू दिन्छ जस्तै छविहरू, बनावटहरू, इत्यादि। यी सुविधाहरूले संभावनाको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। प्लगइनहरूले तपाईंको समय बचत गर्न फोटोशप विस्तार गर्न द्रुत तरीका प्रस्ताव गर्दछ। निम्न नि: शुल्क प्लगइनहरूसँग यो भन्दा के राम्रो तरिका छ।
1 गेट्टी चित्रहरु
2 मसी वा मसी
4 भर्चुअल फोटोग्राफर
7 ओएन १ प्रभाव १०.
सबै डिजाइनरहरूलाई छविहरूको भण्डार चाहिन्छहामीलाई किन सीमित गर्ने? यो प्लगइनहरू गेट्टी चित्रहरु यो तपाइँको लागी र तपाइँ चाहिन्छ कि छविहरू फिल्टर गर्दछ। थप रूपमा, यो अनुप्रयोगले फोटोशपका लागि मात्र काम गर्दैन, तपाईं यसलाई इलस्ट्रेटर र InDesign मा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि तपाईंको सम्पूर्ण परियोजना सकियो र ग्राहक स्वीकृति प्राप्त गर्न तयार हामी एक उच्च रिजोलुसन छवि इजाजतपत्र प्राप्त गर्न सक्दछौं। यस तरीकाले हामी हाम्रा छविहरू राम्रो कार्यप्रवाहको लागि सुरक्षित गर्नेछौं।
मसी वा मसी
डिजाइनरहरूको रूपमा हामी मानिलिन्छौं कि जसले काम पेश गर्छ उसले बुझ्दछ राम्रोसँग। त्यसोभए, यदि हामी विकासकर्ताको लागि काम गर्छौं भने हामी विश्वास गर्छौं कि उनीहरूले हाम्रो प्रोजेक्ट बुझ्नेछन् र अन्ततः हामी चाहानुहुन्छ। तर हामी बिर्स्यौं कि विकासकर्ताहरूले हाम्रो काम बुझ्नु पर्दैन। हामीजस्तै हामी यो बुझ्दैनौं कि यो कसरी विकसित हुन्छ। कल्पनाको अभावले कहिलेकाँही गलत फ्रन्ट आउटपुटहरू निम्त्याउँदछ र यो आशा गरे जस्तो हुँदैन। मसी एक पूरक हो जे तपाइँ तपाइँ तपाइँको लेकग्राफी बाट प्रभाव र आकार आकार मा कागजात द्वारा तपाइँको मकअप को बारे मा अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।
फोटोग्राफरहरूको लागि असंख्य प्लगइनहरू निक स Collection्ग्रहमा समावेश छन्, यसैले यो शीर्षमा किन छ। तर अझ बढि गुगलको अधिग्रहण पछि। पहिले देखि यो article dollars डलर को लागत को लागी यो लेख मा फिट छैन। आज, गुगल कम्पनीलाई धन्यबाद, यो सित्तैमा हो। चाखलाग्दो कुरा के छ भने सर्च राइन्टले संग्रहलाई निरन्तरता दिन DxO लाई हस्तान्तरण गर्न राजी भए।। नयाँ डाउनलोड यूआरएल हुनेछ nikcollection.dxo.com तर यी प्राप्त गर्न अझै सम्भव छ google.com/nikcolલેક્शन अहिलेको समयमा।
यदि तपाईं हतारमा डिजाईनर हुनुहुन्छ भने, वा फोटोशप प्रयोग गरेर निश्चित हुनुहुन्न शैलीयुक्त छविहरू सिर्जना गर्न, भर्चुअल फोटोग्राफर परिष्कृत देखिनु प्राप्त गर्न एक छिटो र प्रभावी तरीका हो पूर्ण गतिमा। सरल क्लिक र अगाडि विकल्पको अर्थ तपाईले चाँडै आफ्नो स्रोत कलाकृति परिवर्तन गर्नुहुनेछ, यद्यपि यो फोटोशप शुरुवातहरूको लागि अनुभवी प्रयोगकर्ताहरूको भन्दा बढी उपयोगी छ।
Quintessential आइकन पृष्ठ Adobe का लागी एक विस्तार छ। हामीलाई थाहा छ कि उनीहरूले फोटोग्राफी र मोन्टेज विशाल फ्रिपिकसँग मिलेर काम गरेका छन, त्यसैले स्रोतहरूको अभाव हुनेछैन। FlatIcon हजारौं नि: शुल्क भेक्टर आइकनहरूको विशाल डाटाबेस हो जुन तपाईं SVG, PSD, वा PNG ढाँचामा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो नि: शुल्क फोटोशप प्लगइनले तपाईंलाई द्रुत आईकनहरू तपाइँको कार्य वातावरण छोड्नुभएन, प्यानलबाट तपाइँको डिजाइनमा सिधा घुसाउँदछ।
सम्पूर्ण क्रिएटिव सुइट प्याकेजमा काम गरेर, यो प्लगइन Shutterstock Shutterstock लाइब्रेरीमा उपलब्ध छविहरूको विस्तृत श्रृंखलामा अनुप्रयोगबाट सिधा पहुँच प्रदान गर्दछ। फोटोशप भित्र खोजी गर्नुहोस्, चयन गर्न र सम्मिलित गर्न क्लिक गर्नुहोस्, र सजिलो कार्यप्रवाहको लागि सीधा लाइसेन्स। यो वास्तवमै मद्दत गर्दछ यदि हामी हाम्रो डिजाइनहरूको लागि नि: शुल्क छविहरू प्रयोग गर्छौं।
ओएन १ प्रभाव १०.
यो कसरी अर्को मामला हो अनुप्रयोग नि: शुल्क हुन्छ एक धेरै उच्च मूल्य पछि। आँखा! हामी गुणको बारेमा कुरा गरिरहेका छैनौं, तर e० यूरोबाट शून्यमा जान महत्वपूर्ण परिवर्तन हो। छविमा छिटो प्रभाव प्राप्त गर्न एक उपयोगी उपकरण। यो र color्ग ट्रीटमेन्ट, बनावट र हल्ला, वा रचनात्मक किनारहरू थप गर्नुहोस्।
त्यहाँ अरू धेरै छन्, तर ती मध्ये धेरैको लागत छ, जुन १€ to देखि २०० सम्म हुन सक्छ। अहिलेको लागि तपाईसँग केही छनौट गर्न स्वतन्त्र छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » Photos निःशुल्क प्लगइनहरू हाम्रो फोटोशप पूरा गर्नका लागि
डेमियन मार्टिन जी भन्यो
नमस्कार, किन यो भन्छन कि NIK संग्रह नि: शुल्क छ यदि यो मात्र day० दिने परीक्षण हो?
Damian मार्टिन जी को जवाफ